I-LA PETIT VALAMBOURG - I-Airbnb
I-LA PETIT VALAMBOURG
I-Petit Valambourg yindlu yomntu ngamnye nefudumeleyo yabantu ababini, elungiswe ngokupheleleyo ngegadi, ekwenye yezona zitrato ziqaqambileyo nezipholileyo zaseAuvers, kufutshane neziko.
- ukuhlala kunye nosapho okanye abahlobo (ukuya kutsho kubantu abane) sinikezela ngeGîte du Valambourg ukuze uyifumane apha : https://www.airbnb.com/rooms/5754088
- kwizibini ezithandanayo okanye iindwendwe ezingakumbi ezizimeleyo, siyakwamkela apha, ePetit Valambourg.
Ingcaciso: Kusenokwenzeka ujoyine ezi zibonelelo zimbini. Ukufumaneka, imiqathango kunye nokubhukisha : @
Umxholo wenye yemizobo yokugqibela kaVincent Van Gogh, uPetit Valambourg unokuhlala abantu ababini kumanqanaba amabini.
Kumgangatho osezantsi, uza konwabela ikhitshi elinento yonke (isitovu esisebenza nge-induction, ioveni esebenza kaninzi, ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba impahla), uvule igumbi lokuhlala eliqaqambileyo (i-TV ye-flat-screen, i-WiFi enikezelweyo nekhululekileyo), ngokwalo ngokwamkela iifestile zayo ezinkulu iveranda ekwabelwana ngayo neGîte du Valambourg, elungele isidlo sakusasa kunye nesidlo sakusasa esithandekayo.
Ngaphantsi, uza konwabela igumbi elitofotofo elineebhedi ezimbini ezibini ezisecaleni ukuze ube sempilweni, unendawo yokuhlambela etofotofo enento yonke (ishawa, ithobhi, umatshini wokomisa iitawuli, umatshini wokomisa iinwele).
Indawo efanelekileyo yokuqala yokufumanisa imbali yenkcubeko kunye nemvelo yendawo eyingqongileyo, okanye i-cocoon efanelekileyo yokuphumla ngoxolo ngexesha lohambo lwezoshishino, i-Petit Valambourg inefenitshala ekhethekileyo kuwe, kwaye idibanisa ubuhle bokwenene kunye nentuthuzelo yale mihla.